जन्मेपछिको तुरुन्तै के गर्नुपर्छ - Hesperian Health Guides
जन्मेपछिको तुरुन्तै के गर्नुपर्छ
हेस्पेरियन स्वास्थ्य विकि > डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण > नवजात शिशुहरु र स्तनपान > जन्मेपछिको तुरुन्तै के गर्नुपर्छ
नवजात शिशुहरु र स्तनपान
जन्मने वित्तिकैको हेरचाह
पहिलो २ महिनामा शिशुलाई परिक्षण गरिरहनुपर्छ
नवजात शिशुका स्वास्थ्य समस्याहरु
जन्मेपछिको करिव एक वा दुई घण्टापछि शिशुले स्तनपान गर्नुपर्दछ र आमाको रक्तश्राव भइरहेको छकी छैन भनेर विचार गर्नुपर्छ । शिशुलाई टाउको देखि गोडाको औंलासम्म सावधानीपूर्वक परिक्षण गर्नुहोस् । शिशुलाई परिक्षण गर्दा न्यानो राख्नुपर्छ ।
२ नवजातहरुका लागि औषधी
३ शिशुको परिक्षण गर्नुहोस्
३.१ टाउकोको आकृति र नाप
३.२ खुँडे ओठ र तालु
३.३ विस्थापित नितम्व, फुस्किएको नितम्ब, तन्तुहरुको असामान्य बृद्धि
३.४ वाङ्गो खुट्टा
३.५ हातखुट्टाका अतिरिक्त औंलाहरु
३.६ मानसिक कमजोरी (डाउन सिण्ड्रोम)
४ शारिरिक असक्षमता भएका वालवालीकाको हेरचाह
५ कुरुपता र शारिरिक असक्षमताको रोकथाम
५.१ गम्भिर जन्मजात खोटहरु
६ शिशुको सरसफाई एवं लुगाy
नवजातहरुका लागि औषधी
यदि आमामा धातुरोग वा क्लमेडिया (प्रजनन अंगहरुसँग सम्वन्धित संक्रमणहरु) भएमा शिशुमा गम्भिर आँखाका समस्याहरु हुन सक्छन् । महिलालाई प्रजनन अंगहरुको संक्रमण हुने र त्यसबारेमा थाहा नै नहुन पनि सक्छ । धातुरोग वा क्लमेडियालाई शिशुको आँखामा नसरोस् भनेर महिला र पुरुष दुवैले यौनरोगको परिक्षण र उपचार गर्नुपर्दछ । संक्रमणका लक्षणहरु र तिनको उपचारबारे जान्नका लागि हेर्नुहोस् प्रजनन अंग सम्वन्धि समस्याहरु र संक्रमणहरु । धातुरोगबाट आँखाको संक्रमणको रोकथामको लागि जन्मेको एक घण्टा वा दुई घण्टाभित्र शिशुको दुवै आँखामा थोरै tएरिथ्रोमाइसिन वा tटेट्रासाइक्लिन मलम लगाउनुहोस् ।
हेपाटाइटिस बि वा कलेजोको क्यान्सर धेरै भएका ठाउँमा हेपाटाइटिस बि को खोप शिशुलाई जन्मेपछिको पहिलो दिनमै दिइनुपर्छ । यसले हेपाटाइटिस बि को संक्रमण आमाबाट शिशुमा सर्नलाई रोक्दछ । महिलालाई हेपाटाइटिस बि भएर पनि त्यसको बारेमा थाहा नहुन सक्छ ।
आमालाई एच आइ भि. भएमा शिशुलाई एच आई भि. को औषधीहरु चाहिन्छ । एच. आइ. भि. र एड्स (तयारीको क्रममा) पनि हेर्नुहोस् ।
शिशुको परिक्षण गर्नुहोस्
शिशु स्वस्थ छ ?
शिशुका प्रजनन अंगहरु स्वस्थ छन् ? (पहिलो दिनमा सुन्निनु सामान्य हो तर ध्यान दिनुपर्छ) ।
शिशुले पिसाब फेर्यो ? पहिलो दिनमा शिशुले पिसाव नफेर्न सक्दछ । तर दोस्रो दिनमा पिसाव फेरेन भने वा पिसाव गाढा रङको र कडा गन्ध भएको छ भने उनलाई वढी स्तनपान गराउनुपर्दछ ।
शिशुले दिशा गरेको छ ? यदि नगरेको भएमा पन्जा लगाउनुहोस् र विस्तारै तपाईंको कान्छी औंला मलद्वार भित्र हाल्नुहोस् ताकि यो बन्द छैन भन्ने थाहा होस् । यदि त्यहाँ प्वाल छैन भने उनलाई शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्छ ।
शिशुको राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्छ ।
केही भिन्नताहरु महत्वपूर्ण हुँदैनन्, तर केही भने घातक समस्याका संकेत हुन सक्दछन् । यदि शिशुमा एउटा भिन्नता देखिएमा त्यहाँ अरु पनि हुन सक्दछन् भन्ने कुरामा सचेत रहनुहोस् । कहिंलेकाहिं तिनिहरु शरिरको भित्रि भागमा समेत हुन सक्दछन् । त्यस्ता शिशुहरुको श्वासप्रश्वास, रङ र पिसाव सामान्य भए नभएको कुरा नजिकबाट नियाल्नुहोस् ।
टाउकोको आकृति र नाप
टाउकोको आकार गोलो वा लाम्चो हुन सक्छ । विशेष गरी लामो प्रसव व्यथा पश्चात शिशुको टाउको चित्रमा देखाएजस्तो चुच्चो भएको वा धेरै सुन्निएको हुन सक्दछ । केही दिनमै सुन्निएको हराएर जान्छ ।
केही शिशुहरुमा टाउको मुनी रक्तश्राव (हेमाटोमा) हुन्छ । यसलाई थिच्दाखेरी नरम महशुस हुन्छ । तर यो खतरनाक हुँदैन र हराएर जान महिनौ वा अझै लामो समय लाग्छ ।
समय नपुग्दै जन्मेका केही शिशुहरुको सानो टाउको हुन्छ र शिशु वढेसँगै सामान्य तवरले विकसित हुँदै जान्छ । यदि शिशुको टाउको ज्यादै सानो छ भन्ने लागेमा स्वास्थ्य कार्यकर्तासँग राय लिनुहोस् ।
खुँडे ओठ र तालु
शिशुको ओठमा काटिएको (खुँडे ओठ) सजिलै देखिन्छ । मुख भित्रको माथिल्लो भागमा चिरा परेको (खुँडे तालु) सधैं देखिदैंन । शिशुको मुखभित्र सफा औंलाको मद्दतले माथिल्लो भाग वन्द भए नभएको महशुस गर्नुहोस् । खुँडे ओठ र तालु भएको शिशुले स्तनपान राम्रोसँग गर्न सक्दैन
स्तनपानको लागि खुँडे ओठलाई औंलाले छोप्ने कोशिस गर्नुहोस् ताकि स्तनको वरपर मुखले पुरै छोप्न सकोस् । खुँडे तालुको लागि स्तनको टुप्पो (निप्पल) र यसको वरपरको कालो भाग (आयरिल) लाई शिशुको मुखको धेरै भित्र र काटिएको (खुँडो) भागको एकापट्टि राख्नुहोस् । यदि शिशुलाई अझै पनि समस्या छ भने सफा चम्चा वा ड्रपरको सहायताले उसलाई स्तनपान गराउन सजिलो हुने गरी विकसित नहुन्जेल आमाको दुध दिनुहोस् । उसलाई धेरैपटक खुवानुहोस् ताकि उ राम्रो अवस्थामा रहिरहोस् । थप सामग्रीका लागि चम्चाले दुध खुवाउनको लागि हातले दुध कसरी निकाल्ने।
नेपालमा आजकल खुँडे शिशुको सित्तैमा उपचार गरिन्छ । यसको उपचार गरेपछि शिशु पूर्ण स्वस्थ हुन्छ । नेपालमा विभिन्न मेडिकल कलेजहरुमा यसको शल्यक्रिया गरिन्छ ।
विस्थापित नितम्व, फुस्किएको नितम्ब, तन्तुहरुको असामान्य बृद्धि
केही बालबच्चाहरु विस्थापित नितम्व (hip) भएका जन्मिन्छन् । नितब्वको हड्डिमा खुट्टा आफ्नो जोर्नीबाट फुस्किएको हुन्छ । प्रायजसो केहि दिन वा हप्तामा यो आफैं निको हुन्छ ।
खुट्टालाई घुम्च्याउनुहोस् जसले गर्दा तपाईं तिघ्रा र तल्लो खुट्टालाई थाम्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको औंलाको टुप्पोहरु शिशुको नितम्वमा राख्नुहोस् । त्यसपछि एकपटकमा एउटा खुट्टालाई सानो वृत्तमा घुमाउनुहोस् (वाहिर, वरिपरि, तल र फेरी माथि) । यदि एउटा खुट्टा त्यसलाई फट्याउँदाखेरी चाँडै रोकिन्छ, वटारिन्छ भने त्यो विस्थापित भएको हुन सक्दछ ।
आमालाई आफ्नो शिशुका खुट्टाहरु यहाँ देखाइएजस्तै खुला हुने गरी पिठ्युँमा बोक्न भन्नुहोस् । दोस्रो सातामा फेरी शिशुलाई परिक्षण गर्नुहोस् । यदि तपाईं वटारिएको वा टकराएको अझै महशुस गर्नुहुन्छ वा सुन्नुहुन्छ भने चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ ।
यदि नवजात शिशुको खुट्टाको तल्लो भाग (foot) भित्रपट्टि फर्केको छ वा नराम्रो आकारको छ भने यसलाई सहि स्थानमा मोड्ने कोशिस गर्नुहोस् । यदि तपाईं यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई प्रत्येक दिन धेरै पटक दोहर्याउनुहोस् । खुट्टाहरु विस्तारै सामान्य हुनेछन् । यदि तपाईं शिशुको खुट्टालाई सामान्य अवस्थातिर सजिलै बङ्ग्याउन सक्नुहुन्न भने उसलाई जन्मेको केहि दिन भित्रै स्वास्थ्य केन्द्रमा लैजानुहोस् । उसको खुट्टालाई प्लाष्टरको सहायताले सिधा पार्नुपर्ने हुनसक्छ । यदि शुरुमै यो गरिएमा प्लाष्टरले गर्दा पछि शल्यक्रिया गर्नबाट वा अपाङ्गता हुनबाट जोगाउँछ । यसको उपचार ठूला अस्पतालमा शल्यक्रियाद्वारा गर्नुपर्छ ।
हातखुट्टाका अतिरिक्त औंलाहरु
भित्र हाड नभएको हातखुट्टाको अतिरिक्त औंलालाई त्यसको वरपर पातलो डोरीले कसिने गरी बाँधेर हटाउन सकिन्छ । यो सुकेर आफैं खस्छ । यदि औंला ठूलो छ वा हाड भएको छ भने यसले हानी गर्दैन ।
खुट्टाको औंलाको बिचमा यसरी नै थोरै मात्र खालि भएमा कुनै समस्या हुँदैन ।
दुईवटा वा वढी र्औंलाहरु सँगसँगै जोडिएका छन् भने राम्रोसँग काम गर्न तिनलाई शल्यक्रिया चाहिन्छ ।
मानसिक कमजोरी (डाउन सिण्ड्रोम)
यस्तो शिशुको सोच्ने र सिक्ने क्षमता कम हुन्छ । डाउन सिण्ड्रोम मानसिक सुस्तीको प्रमुख कारक हो । डाउन सिण्ड्रोम भएका शिशुहरुलाई यि लक्षणहरु केहि वा सबै देखिन्छन्ः
माथिपट्टि फर्किएका आँखा
हत्केलामा एउटा मात्र रेखा
माथि छाला घुम्रिएको सानो कान
माशंपेशिको तन्क्याई र खुम्च्याई (muscle tone) मा कमी
खुट्टाको पहिलो र दोस्रो औंलाको बिचमा चौडा ठाउँ
प्रत्येक वालवालिकामा भएको क्षमतालाई हेर्नुहोस् ।
डाउन सिन्ड्रोमको कारण थाहा हुँदैन । यदि महिला गर्भवती हुँदा ३५ वर्षभन्दा वढी उमेरकी छिन् भने उनको शिशुलाई यस्तो हुने वढी सम्भावना हुन्छ । यस्ता शिशुहरुलाई अन्य शिशुहरुलाई गरिएजस्तै समान स्नेह र सावधानी चाहिन्छ, र साथै केही साधारण क्रियाकलापहरुले तिनलाई सिक्न सघाउँछ । थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस् हेस्पेरिएनको किताब अपागंता भएका ग्रामिण वालवालिकाहरु अर्थात Disabled Village Children,परिच्छेद ३२ मा ।
शारिरिक असक्षमता भएका वालवालीकाको हेरचाह
शारिरिक असक्षमता भएका बालबच्चालाई स्वास्थ्य कार्यकर्ताको सहयोग लिई परिवारले घरमै उपचार गर्न सक्दछन् । यस्तो बच्चालाई माया र स्नेह दिई धैर्यतापूर्वक उपचार गर्नुपर्छ ।
कुरुपता र शारिरिक असक्षमताको रोकथाम
शारिरिक असक्षमता किन हुन्छ भन्ने थाहा छैन । केही जोखिमहरुले जन्मजात खोटहरु (birth defects) लाई वढाउँदछ भन्ने हामीलाई थाहा छ । त्यसैले कुनै खास बच्चालाई शारिरिक असक्षमताबाट जोगाउन हामी सफल नभएपनि कुनै समूदायमा जन्मजात हुने असक्षमतालाई घटाउन सकिन्छः
महिलाहरुलाई खानको लागि पोषणयुक्त खाना (प्रोटीन, तरकारीहरु, आयोडिनयुक्त नुन समेत) प्रशस्त पाउनको लागि सहयोग गर्नुहोस् ।
पुरुष र महिलाका लागि सुरक्षित काम गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यस्थलको निमित्त सङ्घर्श गर्नुहोस् ताकि कसैले पनि जन्मजात खोटहरु निम्त्याउन सक्ने हानीकारक रसायनहरु, विषादीहरु वा कडा सरसफाई सामग्री (क्लिनर्स) को संसर्गमा आउनु नपरोस् ।
वयस्क एवं वालवालिकाको लागि खोप अभियानहरुको आयोजना गर्ने एवं सहभागिता गरेर शिशुलाई दादुरा र अन्य रोगहरुबाट जोगाउनुपर्छ ।
गर्भवती महिलाहरुलाई लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरुबाट जोगाउनुहोस् । हेर्नुहोस् लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरु ।
गर्भवती महिलाले मदिरा र धुम्रपान एवं अनावश्यक औषधीहरु प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
गर्भवती महिलाको वरीपरि पनि कसैलाई धुम्रपान गर्न नदिनुहोस् ।
आमाको हेरविचार गरेमा शिशुको पनि संरक्षण हुन्छ ।
गम्भिर जन्मजात खोटहरु
केही जन्मजात खोटहरुले शिशुको ज्यान नै जान्छ । यसले परिवार र समूदायलाई दुःखी बनाउँछ । स्वास्थ्य कार्यकर्ताको रुपमा तपाईंले उनीहरुको दुखःमा सहानुभूती र ढाडस दिनुपर्छ ।
शिशुको सरसफाई एवं लुगाy
शिशुलाई न्यानो पारेर राख्नुपर्छ । तर मोटा मोटा सिरकले गुम्स्याउनुहुँदैन ।
पहिलो एक वा दुई हप्तासम्म शिशुको टाउकोलाई ढाक्नुहोस् किनभने धेरै ताप टाउकोबाट जान्छ । कपडा वा डायपर भिज्ने बित्तिकै वा दिसापिसापबाट फोहर हुने बित्तिकै अर्को फेर्नुपर्छ । यदि डायपर मुन्तिर छाला रातो भएमा वा फोका देखिएमा शिशुलाई त्यो ठाउँमा तेल लगाएर घाममा राखिदिनुपर्छ ।
"http://ne.hesperian.org/w/index.php?title=New_Where_There_Is_No_Doctor:जन्मेपछिको_तुरुन्तै_के_गर्नुपर्छ&oldid=294" बाट निकालिएको
अरू भाषाहरूमा Filipino IsiNdebele saseNyakatho አማርኛ العربية English Español فارسی Français Hausa Bahasa Indonesia Kiswahili Kreyòl ayisyen ລາວ ភាសាខ្មែរ Português Soomaaliga اردو 中文